Raad Raac News Online – DAAWO SAWIRO:- Munaasabadda Xuska Sanadguuradii 15-aad Ee Puntland Oo Ka Dhacday Madaxtooyada Garoowe
DAAWO SAWIRO:- Munaasabadda Xuska Sanadguuradii 15-aad Ee Puntland Oo Ka Dhacday Madaxtooyada Garoowe
Editors Chief August 2, 2013
Garoowe:- waqtigii la asaasay puntland oo xiligan laga joogo 15-sano ayaa sanadkasta bisha 8-aad 1-deeda waxaa puntland iyo caalamkaba ka dhaca munaasabado kala duwan oo lagu maamuusayo jiritaanka puntland.
Madal si heer sare ah loo agaasimay taasi oo lagu xusayay 1-da August ayaa waxaa laguq abtay aqalka madaxtooyada Puntland ee garoowe, waxaana madashaasi ay wax badan ka duwanayd munaasabadihii hore loo soo qabtay.
Waxaa goob joog ahaa munaasabadda madaxda ugu sarraysa dowlada puntland oo ay ka mid ahaayeen madaxweyne Faroole,gudoonka baarlamaanka c/rashiid max’ed xirsi,issimada puntland, ururada bulshada iyo kuwa haweenka,dhalinyaro kala duwan,siyaasiyiin rer puntland ah,bahda fanka iyo suugaanta puntland, iyo qaar kale oo ka mid ah qaybaha bulshada.
Golaha wasiirada qaybtood oo madasha ka hadlaya ayaa siyaabo kala duwan u sharaxay waxqabadkoodii mudada ay xilka hayeen, waxayna tilmaameen inay hiigsanayaan waxqabad intaasi ka badan.
Si kastaba munaasabadda waxaa laga soo jeediyay khudbado kala du